Manje usungaqasha iMac mini M1 amahora efwini | Ngivela kwa-mac
Manje ungaqasha iMac mini M1 ngehora efwini
UToni Cortes | | Mac Mini
Uma ufuna ukuzihlola ukuthi amakhompyutha we-Apple Silicon amasha asebenza kanjani, manje usungakwazi ukuqasha iMac mini ene-M1 processor yamafu, ngentengo ebiza kakhulu. Kubukeka kuyisilima kodwa akunjalo.
Sisesikhathini sobhadane, futhi ukusebenza ngocingo sekuyimpoqo kweminye imikhakha, kubandakanya neyonjiniyela bezicelo. Noma ngabe ungunjiniyela ozimele futhi usebenza wedwa, noma ungowenkampani enkulu futhi usebenza ekhaya, ukuqasha i-Apple Silicon ukuze kwenziwe izivivinyo ezithile kukuxazululela inkinga, akusakusebenzi athenge wena iMac entsha yokuhlola izinhlelo zakho zokusebenza kumprosesa we-M1.
Ukufinyelela iMac mini efwini bekuvele kungenzeka kusukela ekupheleni konyaka odlule. I-Amazon Web Services (AWS) iqale ukunikeza ukufinyelela kwiyunithi ye-Mac mini (Intel) nge-Euro eyodwa ngehora, ngamaphakeji angamahora angama-24. I-Scaleway, Inkampani yezinsizakalo zefu yaseYurophu, manje isinikeza inguqulo yeMac mini eneprosesa ye-M1 nge 0,10 € ngehora, ngephakeji elifanayo lamahora angama-24.
Ngaphandle kokungabaza, insiza egxile kakhulu ku- amaqembu entuthuko Izicelo ze-iOS ne-MacOS. Kunenzuzo enkulu ukusebenzisa le ndlela ekuhloleni amabala endaweni ye-Apple Silicon kunokuthenga imishini emisha yabo bonke abathuthukisi abasebenza kuphrojekthi, futhi ikakhulukazi uma bethutha bevela ekhaya.
Ngokuthola isevisi, uyakwazi ukufinyelela amahora angama-24 ukusuka kwikhompyutha yakho kuya kwi-Mac mini M1 enenguqulo yakamuva ye- IMacOS Big Sur neXcode. Kuyindlela enhle yokwenza izivivinyo ezithile zamaphrojekthi entuthuko ku-Apple Silicon.
I-Scaleway ifake iMac mini M1s yayo entsha esikhungweni sayo semininingwane seDC4 ebisendaweni eyayihlala phansi indawo engaphansi kwamamitha angama-25 ngaphansi komhlaba eParis, eFrance. Kusukela namuhla, amakhasimende eScalway angazuza kwi-Mac mini M1 kusuka noma yikuphi emhlabeni, ngamasenti ayi-10 ngehora.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Amakhompyutha we-Mac » Mac Mini » Manje ungaqasha iMac mini M1 ngehora efwini
I-beta yokuqala ye-macOS 11.3 esevele isezandleni zabathuthukisi
UBillie Eilish usenayo i-trailer esemthethweni ye-Apple TV + documentary